Janrain: Tora uye Usimbise Hupo Hwako Hwevanhu Martech Zone
Janrain: Tora uye Usimbise Hupo Hwako Hwevanhu
Muvhuro, July 30, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Saka iwe une yako yemagariro midhiya kuvepo uye kumhanya Iwe uri kuwedzera mafeni uye vateveri nezuva uye kuwana runyerekupe rwevashanyi kune yako saiti. Zvemagariro midhiya zviri kukupa iwe kukura, asi iwe hausi kuona kudzoka pane investment iyo yese yemagariro midhiya gurus iri kutaura nezvayo. Zvemagariro enhau zvinoita kunge iyi neti hombe, asi hausi kubata chero chinhu nekuti munhu wese ari kutsvedza nemumaburi.
Pane zviitiko zviviri zvakakosha kana zvasvika kushambadziro yemagariro.
Kushandura fan kana muteveri mune tarisiro kana mutengi. Kungoti nekuti vanhu vanokutevera kana kuda peji rako hazviite chokwadi kuti ivo vachazonyatsopinda mukushambadzira kwako.
Kuwana fan kana muteveri ku wedzera meseji yako kunetiweki yavo. Yako yekutanga network ine simba, asi haina kuita senge yekuwana izwi-re-muromo traffic kubva kune ye fan network.
Janrain Engage inovhara mukaha mune zvese izvi zviitiko, ichipa saiti yako nzira yepasirese yekutora data yemushandisi, uye nekupa chikuva chekugovana kuitira kuti zvive nyore kukwidziridzwa kwemeseji yako kunetiweki dzevateveri vako. Fungidzira uchikwanisa kutora iyo email kero yemunhu wese anobata neyako brand munharaunda, kuti iwe ugone kukura yako email rondedzero uye kusundira zvimwe zvinopihwa kune avo vanopinda-mukati!
Janrain Engage iri Turnkey mhinduro iyo inopa vashandisi kunyoresa kana kusaina pane yako saiti neakaundi kubva kune imwe ye25 + social network uye email vanopa, kusanganisira Facebook, Google, Twitter uye Yahoo!. Ita nyore kunyoreswa, kubvisa kudiwa kwevashandisi kurangarira mapassword uye kuwana data rakapfuma rezita kubva kune yemushandisi social network account nemvumo
Janrain akasimba uye akanyatsobatanidzwa. Kana yako CMS iri WordPress, pane yakasimba plugin kugonesa Shingairira pane yako saiti kana blog. Janrain inosanganisirana neakakurumbira ekupa maitiro masisitimu senge Disqus, Echo uye Pluck.
Kuita Janrain kunogona kubatsira kushambadzira kwako nezvikomborero zvinotevera:
Wedzera Kunyoresa Saiti - Deredza zvipingamupinyi pakunyoresa, mhanyisa kusaina maitiro uye wedzera shanduko mitengo kubva kune vashanyi vesaiti kuenda kune vakanyoreswa vashandisi nekugonesa kupinda neiyo iripo social network kana webhu tsamba account.
Gadzira Zvimwe Zvakasarudzika, Kubata Zviitiko -Pamberi-pekuzadza mafomu ekunyoresa uye upe zvakanangwa zvakanyanya, zvakajairwa ruzivo kune vashandisi vako nekuunza rakapfuma mushandisi data data, shamwari mazita uye kero mabhuku.
Kukura Brand Kuzivisa uye Gadzira Referral Traffic -Batanidza saiti yako kune yewebhu webhu uye upe vashandisi vako mukana wekuparadzira zvemukati nekuita kuti zvive nyore kune vashandisi kuburitsa zviitiko kubva kune yako saiti kuenda kune akawanda masocial network panguva imwe chete.
Tags: Vanoitajanrainjanrain itakusangana kwevanhukunyoresa kwevashandisiwordpress kusanganaWordpress kunyoresa